Faylasha DMG, sidee u furmaan? Maxay yihiin | Waxaan ka socdaa mac
Ignacio Sala | | Barnaamijyada Mac, Tababarada
Haddii aan ugu dambeyntii go'aansanay inaan ka beddelno Windows illaa Mac, waxay u badan tahay inta lagu jiro toddobaadyada ugu horreeya, inaad wax yar lumineyso, kaliya maahan isbeddelka interface-ka, laakiin sidoo kale habka aan ula macaamili karno. Nidaamka hawlgalka Apple ee kombiyuutarada iyo laptop-yada. Mid ka mid ah isbeddelada waaweyn ee aan soo jiidan doonin dareenka ugu badan ayaa ah ma jiraan faylal la fulin karo, caadiga .exe.
On Mac qaabka DMG ayaa loo isticmaalaa. Faylasha qaabkan waa faylasha weelka halkaas oo aad ka heli doontid barnaamijyada aan dooneyno inaan ku rakibno kombuyuutarkeena, si dhakhso leh oo fudud. Ilaa aad raadineysid codsiyo gaar ah oo aan laga heli karin Mac App Store, uma badna inaad ku dambeyn doonto feyl noocan ah.
1 Waa maxay faylka DMG maxaase loogu talagalay?
2 Sida loo furo faylasha DMG
2.1 Si loo rakibo waxyaabaha ku jira gudaha
2.2 Ku soo celi waxyaabaha wadista
3 Codsi noocee ah ayaan ubaahanahay inaan ku furo feyl qaab DMG ah
4 Maxaa la sameeyaa haddii faylka DMG uusan furi doonin
5 Sida loogu beddelo feyl DMG ah EXE
6 Sida loo akhriyo faylasha DMG ee Windows
6.2 Soosaaraha DMG
7 Sida loo akhriyo faylasha DMG ee Linux
Waa maxay faylka DMG maxaase loogu talagalay?
Faylasha DMG waxay u dhigmaan feylasha qaabka ISO ee Windows, tan iyo markii la furayo, unug cusub ayaa la abuuray, waa unug aan u baahan nahay inaan marinno si aan ugu rakibno feyl u dhigma kombuyuutarkeena ama aan ugu wareejino galka codsiyada. Faylka noocan ah badanaa wuxuu ka kooban yahay, marka lagu daro feylka noo ogolaanaya inaan ku raaxeysano barnaamijka, dukumiinti qoraal ah oo sharaxaad kooban ama leh tilmaamaha ku saabsan hawlgalka ama waafaqsanaanta.
Sida loo furo faylasha DMG
Faylasha DMG waxay u dhigmaan ISO-yada Windows-ka. Faylasha ku jira qaabka ISO, kaliya noo oggolaan mayno inaan gudaha u galno oo aan ku koobiyeynno CD ama DVD siduu yahay, laakiin sidoo kale noo oggolow inaan rakibo ama nuqulno nuxurkooda. Faylasha qaab DMG ah, seddex meelood seddex meel oo isku mid ah ayaa dhacaya, maaddaama faylka laftiisu uu noqon karo rakibe aan kala bixinno, muddo, ama waxay noqon kartaa muuqaal disk ah oo ay ku jiraan faylal kala duwan oo ay tahay in la soo guuriyo sida ugu fiican fayl kale ama wadid dibedda ah.
Si loo rakibo waxyaabaha ku jira gudaha
Inkasta oo marka hore ay umuuqato inaan ubaahanahay inaan fulino geeddi-socod adag oo aan awood ugu yeelan karno inaan ku furno feyl qaab DMG ah, haddana ma jiraan wax xaqiiqda ka fog, maadaama aan kaliya labo jeer ku riixeyno si aan u abuurno unug cusub waxaan ka heli doonnaa dhammaan waxyaabaha ku jira gudaha. Markaas waa inaan kaliya marin u hesho darawalka su'aasha iyo socodsiinta feylka si loo rakibo ama loo ordo.
Waa inaan tixgelinno nooca feyl ee ay tahay, maadaama mararka qaarkood, rakibidda lafteeda laguma fulinayo Mac-dayada, laakiin dalabku wuu socdaa oo keliya, markaa haddii aan mar dambe tirtirno faylka .DMG waan waayi doonaa marin u helka arjiga. Xaaladahaas oo kale, haddii ay tahay codsi la fulin karo, waa inaan u jiideynaa feylka codsiyada.
Ku soo celi waxyaabaha wadista
Haddii, dhinaca kale, ay tahay sawir ka kooban nuqul unug, wax wanaag ah nagama tari doonto inaan galno gudaha feylka si aan ula tashanno haddii aynaan awoodin inaan helno xogta ama aan sameyno isticmaalka arjiga. Xaaladahaas oo kale, waa inaan isticmaalnaa Disk Utility, oo aan ku adeegsan karno xulo feylka qaab DMG ah oo aan rabno inaan soo celino iyo cutubkiisa halkaas oo aan dooneyno inaan si deg deg ah oo aad u fudud ku sameyno
Codsi noocee ah ayaan ubaahanahay inaan ku furo feyl qaab DMG ah
Sida Windows uma baahnid codsi dhinac saddexaad ah oo aad kula shaqeyso faylasha qaab ISO ah, Macna uma baahnid wax codsi ah oo aad kula shaqeyso faylasha qaab DMB ah, inkasta oo internetka aan ka heli karno codsiyo kala duwan oo noo oggolaanaya inaan sameyno dhab ahaan looma baahna, ilaa laga reebo waxaan ku qasban nahay inaanu ka furno faylka noocan ah barnaamijyada kale sida Windows ama Linux, halkaas oo codsiga PeaZip uu ka mid yahay kuwa ugu badan ee lagu taliyo, waa codsi gebi ahaanba bilaash ah.
Maxaa la sameeyaa haddii faylka DMG uusan furi doonin
Tan iyo markii la sii daayay macOS Sierra, Apple waxay si asal ahaan ah u baabi'isay awoodda lagu rakibo codsiyo dhinac saddexaad ah oo aysan abuurin horumariyeyaal ay horay u caddeysay Apple. Haddii feylka DMG ee ka kooban arjiga aan rabno inaan rakibno uu na tuso farriin qalad ah, oo sheegaya in faylka laga yaabo inuu musuqmaasuq yahay, waa inaan dhaqaajin karnaa suurtagalnimada in la hawlgeliyo codsiyo dhinac saddexaad ah iyadoo la gelayo khadka soo socda ee Terminal
sudo spctl –master-gab
isha! sayidka hortiisa waxaa ku yaal laba dhudhun (- -) Marka xigta waa inaan dib u bilownaa Raadiyaha amarka soo socda: Killall Finder
Mar alla markii aan amarkaas galnay, waxaan ku laabaneynaa qaybta Amniga iyo asturnaanta oo ku dhex taal Nidaamka Xulashada iyo In loo oggolaado codsiyada laga soo dejiyo: xulo Meelkasta.
Sida loogu beddelo feyl DMG ah EXE
Faylka DMG, sidaan kor ku soo sheegay, waa galka ay ku jiraan dhowr codsi, oo abuuraya halbeeg markii aan fureyno, marka ma ahan feyl lagu fulin karo Mac, sidaa darteed, uma rogi karno feyl DMG ah EXE. Isku dayida inaad u beddesho feyl DMG feyl la fulin karo waxay la mid tahay u beddelashada galka leh sawirrada (tusaale ahaan) feyl la fulin karo.
Sida loo akhriyo faylasha DMG ee Windows
Haddii aan rabno inaan marin ka helno waxyaabaha ku keydsan faylka DMG ee PC-ga ah, Windows-ka waxaan ku haysannaa qashinkeenna codsiyo kala duwan oo noo oggolaanaya inaan kala qaadno faylka si aan u helno waxa ku jira. Arrin kale ayaa ah inaan wax ku qaban karno waxa ku jira. Codsiyada ugu fiican ee aan hadda ka heli karno suuqa shaqadan waa PeaZip, 7-Zip iyo DMG Extractor.
Mid ka mid ah aaladaha ugu fiican ee bilaashka ah ee lagula shaqeyn karo feylasha la isku tuuray waa PeaZip, aalad la jaan qaadi karta dhamaan qaababka ugu badan ee loo isticmaalo suuqa, marka lagu daro DMG, ISO, TAR, ARC, LHA, UDF ... iyo maahan Dhibaato kuma lahaan doonno inaan si deg deg ah ku qabanno codsigan si aan uga furno wixii faylka DMG ah Windows PC-gaaga.
Soo dejiso PeaZip
Soosaarayaasha DMG, sida magaceedu tilmaamayo, waa codsi aad u fiican oo aad awoodid ka soo qaad waxyaabaha ku jira faylasha qaab DMG ah si dhakhso leh oo fudud. Qalabkani maaha mid bilaash ah laakiin munaasabado gaar ah, waxaan kala soo bixi karnaa nooca tijaabada ah iyada oo loo marayo xiriirka soo socda, nooc noo ogolaanaya inaan ku kala furfurno feylasha qaab DMG ah oo cabirkoodu uusan ka weyneyn 4 GB.
7-Zip waa aalad aad u fiican oo lagu cadaadiyo laguna jajabiyo nooc kasta oo feylal ah oo ku jira Windows PC, aalad sidoo kale ah waa gebi ahaanba bilaash ah oo la jaan qaada faylasha macOS DMG. Mar alla markii aan rakibnay arjiga, waa inaan dul istaagnaa feylka, midig-guji oo xulo furitaanka 7-zip si aan u bilowno soo saaridda waxyaabaha ku jira.
Sida loo akhriyo faylasha DMG ee Linux
Laakiin haddii aan dooneyno inaan ku furno feylal qaab DMG ah oo ku jira Linux, waxaan mar kale ka faa'iideysan karnaa PeaZip, isla codsi aan u isticmaali karno inaan ku baabi'inno faylasha noocan ah ee ku jira Windows, codsi la jaan qaada in ka badan 180 nooc Oo waliba gabi ahaanba waa bilaash.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Tababarada » .Dmg faylasha
Waxaan haystaa dhibaato.
Marka laba-gujintu faylka aysan fureyn, waxay usii ekaaneysaa sidii iyadoo uusan fileynin
Jawaab santiago Estrada
Waxbarasho, Mac iyo Talooyin. Tallaabo istiraatiiji ah
Lisa, Steve Jobs gabadhiisa waxay qoreysaa buug ku saabsan xiriirka aabaheed